Wasaaradda Arrimaha Dibbada oo qorsheyneysa inay ku dhowaaqdo go’aan cusub -
HomeWararkaWasaaradda Arrimaha Dibbada oo qorsheyneysa inay ku dhowaaqdo go’aan cusub
Wasaaradda Arrimaha Dibbada oo qorsheyneysa inay ku dhowaaqdo go’aan cusub
Wasaaradda Arrimaha Dibbada Soomaaliya ayaa markale isugu yeertay saxafiyiinta shir gaar ah oo aysan shaacin arrimaha looga hadlayo kadib markii shalay ay wasaaradu ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay wadanka Guinea.
Qoraal saxaafada loo kala direy ayaa lagu sheegay in Wasaarada Arrimaha Dibbada iyo Iskaashiga Caalamiga ee dowlada Federalka qabanayso maalinta sabtida ah ee bisha July tahay 6 shir gaar ah.
Hase yeeshee Wasaarada arrimaha dibada ayaa 3dii bishan ku martiqaaday saxafiyiinta xarunteeda, balse dib uga laabatay shir jaraa’id oo lagu waday inuu qabto wasiirka arrimaha dibbadda, balse maalintii ku xigtay la qabtay.
Wasaaradda Arrimaha Dibbada Soomaaliya ayaa lagu dhaliilaa inay saxaafada u soo bandhigto go’aano rasmi ah kuwaasoo si weyn loogu dhaliilo wasaarada,waxaana dadka siyaasada u dhuundaloola ay ku tilmaamaan wasaarada inay tahay mid aan jiho wanaagsan ku socon isla markaana aan qaangaar ahayn.
Go’aankii u dambeeyay ee wasaaradu ku sheegtay in xiriirka ay u jartay dalka Guinea ayaa waxaa ka hadlay dad badan iyadoo lagu dhaliilay wasaarada inay xiriirka u jartay dal aan xiriir diblumaasiba la lahayn dalka Soomaaliya.